Izinhlelo Ezi-5 Ezilusizo Ezizokwenza Ukuhamba Kwakho Kube Lula | Izindaba Zokuhamba
Izinhlelo zokusebenza ezi-5 eziwusizo ezizokwenza ukuhamba kwakho kube lula
Maria | | Amathiphu, travel
Enye yezinto ezimnandi kakhulu empilweni ukuhamba. Ukwazi wonke amagumbi omhlaba kusivumela ukuthi sithole okuhlangenwe nakho futhi sikhule njengabantu futhi sithole ezinye izindlela zokuphila, amanye ama-landscapes namanye ama-gastronomies esimangalisa ngawo.
Isimanjemanje nentuthuko yezobuchwepheshe yakamuva isenze saba ngabahambi bedijithali, abakwaziyo ukusebenzisa ngokugcwele zonke lezo zicelo ezinikezelwe kwezokuvakasha ukuze siguqule uhambo lwethu lube yinto engalibaleki.
Phakathi kokungapheli kwezinhlelo zokusebenza ezinikezelwe kwezokuvakasha ezikhona njengamanje, esihlokweni esilandelayo siqokomisa ezinhlanu ezizokusiza ezimeni ezahlukahlukene kakhulu ezingavela ngesikhathi sakho seholide.
5 Ukuphunyuka Okuyimfihlo
Elinye lamaphupho amabi umhambi angaba nawo ukuthi indiza yakhe iyakhanselwa, ubambezeleka, alahlekelwe ukuxhumana noma abhukwe ngokweqile lapho esezoqala iholide lakhe. Ngaphandle kokungabaza, kungumsebenzi osongela ukuthatha yonke injabulo nokuzola obekuhlongoze ukuhamba nakho ohambweni.
Uhlelo lokusebenza lwamahhala ku-iOS naku-Android olungakusindisa ezinkingeni yiFlyPal. Ubuhle bayo obukhulu ukuthi iveza isihambi futhi ngesikhathi sangempela izinketho ezingazifuna ezinkampanini zezindiza uma kunenkinga ngendiza yazo ngokuya ngemithetho yaseYurophu. Okusho ukuthi, ikwazisa ngokunakwa izinkampani zezindiza okufanele zikunikeze zona mayelana nezinye izindiza ezinezihlalo, isinxephezelo sezezimali noma ukubuyiselwa kwemali. Ngaphezu kwalokho, uma inkampani yezindiza inganikeli isihambi usizo olufanele, kusukela esicelweni uqobo, iziphathimandla zaseYurophu zingaziswa ukuthi ziphethe ukuhlawulisa lezi zinkampani lapho zehluleka ukuhambisana nezibopho zazo.
Lokhu okwenziwe eSpain application kuhlanganisa insizakalo yokuqondisa izivakashi nokukhethwa kokuqukethwe okwenziwe ngumsebenzisi. Isetshenziswa ngabantu abangaphezu kuka-800.000, ungahlela iholide lakho ngemizuzwana uye ezindaweni ezingaphezu kwezingu-10.000 XNUMX njengoba linikeza imininingwane ewusizo mayelana nedolobha olivakashelayo, izeluleko ezivela kwabanye abasebenzisi namamephu endawo ngaphandle kokuxhunywa kwi-Intanethi, okuthile okuhle uma siphesheya.
Nge-TouristEye ungagcina izindawo zakho eziyizintandokazi noma izincomo zezindawo ongazivakashela ezizenzela kuwe ohlwini lwezifiso bese ungabheka kuzo ukuhlela izindlela zakho ozobaleka kuzo. Kugqama kalula ukusetshenziswa kwayo namathuba amahle okwabelana ngohambo lwakho ngamanethiwekhi omphakathi. Ngaphezu kwalokho, indawo ngayinye esiye kuyo ingamakwa ngokuthi "yavakashelwa" futhi izokwengezwa "kudayari yezokuvakasha" yethu, enesikhala sokubhala amanothi.
ITouristEye iphinde inikeze ithuba lokuthola izaziso nezaziso uma kukhona okunikezwayo okuthakazelisayo ngempelasonto ukwenza uhambo ngomzuzu wokugcina. Akungabazeki ukuthi ingenye yezinhlelo zokusebenza ezihamba phambili zokuqondisa izivakashi futhi yingakho isibe esinye sezicelo zokuhamba zokukhomba. Kangangokuthi yatholwa yiLonely Planet enkulu, engomunye wabashicileli abahamba phambili emhlabeni.
Abathandi be-ecotourism nemidlalo ye-adventure bazothola i-Alpify ilusizo kakhulu. Lolu hlelo lokusebenza lusebenzisa ubuchwepheshe be-geolocation obunembile kakhulu ukusitholela ngaphandle uma kwenzeka ingozi noma ukulahleka. Ngaphezu kwalokho, isebenza ngokuxhumana nezinsizakalo eziphuthumayo zemiphakathi ezimele.
Uma kwenzeka ingozi, kudingekile kuphela ukuthi umsebenzisi aphathe iselula futhi abe ne-tracker yesicelo ukuze akwazi ukuthumela isignali ephuthumayo kumasevisi ayi-112 ngokucindezela inkinobho ebomvu. Ngaphezu kwalokho, lapho ingekho i-Intanethi, isicelo sesimo esiphuthumayo sithunyelwa nge-SMS futhi sifinyelela kuhlelo lwe-Alpify ngqo oluzocutshungulwa ngabezimo eziphuthumayo abangama-112.
Ibalulekile uma uhamba izintaba wedwa noma udlula ezindaweni ezingaziwa. I-Alpify isebenza kulo lonke elaseSpain, e-Principality of Andorra naseWaraira Repano National Park eCaracas (Venezuela). Itholakalela i-iOS ne-Android.
Izigidi zabasebenzisi emhlabeni jikelele kwesinye isikhathi zisebenzise iTripadvisor ukuhlela izindlela zazo zokubaleka ngokuningiliziwe, okwenza ukuthi kube ngesinye sezinkundla zokuhlelela ukuhamba ngobuchule.
Lolu hlelo lokusebenza lunemibono kanye namazwana angaphezu kwezigidi ezingama-225 nokuphawula okuvela kubahambi bangempela, okwenza kube lula ukuthola amahhotela amahle kakhulu, izindiza ezingabizi kakhulu, izindawo zokudlela ezipholile kakhulu nemisebenzi ethokozisayo ongayenza nomaphi lapho uya khona. Ngaphezu kwalokho, ngokuchofoza okukodwa, uzokwazi ukufinyelela izinketho zokubhuka zamahhotela, izindawo zokudlela nezindiza. Uhlelo lokusebenza ukuhlela uhambo ngokuphazima kweso!
Lolu hlelo lokusebenza luzoba ngumngane wakho omkhulu lapho ulungiselela uhambo njengoba likuvumela ukuba ubhukhe amakamelo amahhotela okunethezeka ngeselula yakho ngezaphulelo ezingafika kuma-70%. Ngenxa yalolu hlelo lokusebenza, abasebenzisi bazokwazi ukubeka uphawu lokubekisa amahhotela ezinkanyezi ezine nanhlanu endaweni abazoya kuyo futhi bathole izaziso mayelana nezaphulelo ezikhethekile ngendlela eqondene nomuntu.
I-Escapes eyimfihlo ixoxisana nezindawo zokuhlala kuphela ngakho-ke akukho qhinga, kuphela ukuthi okunikezwayo kunosuku lokuphelelwa yisikhathi futhi kuyatholakala ngesikhathi esilinganiselwe. Lolu hlelo lokusebenza luyatholakala nge-iOS ne-Android.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Izinhlelo zokusebenza ezi-5 eziwusizo ezizokwenza ukuhamba kwakho kube lula
Uhambo oluya e-Okinawa, eJapane elishisayo